छात्रा अधिकार दिवसको अवसरमा महिला विशेष कार्यक्रम सम्पन्न – Artha Sarokar- Sudurpaschim Edition
धनगढी । अन्तरास्ट्रिय छात्रा अधिकार दिवसको अवसरमा धनगढीमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । असोज २५ गते परेको दिवसको अवसरमा धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा अवस्थित सिद्धनाथ माध्यामिक विध्यालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
धनगढी उप-महानगरपालिकाका नगरप्रमुख नृप बहादुर वडको प्रमुख आथित्यतामा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमा महिलालाई लक्षित गर्दै विभिन्न गतिविधि गरिएको छ । छात्रा अधिकार दिवसलाई एक दिवसको रुपमा मात्रै नभएर अधिकार प्राप्तिका लागि तल्लो स्तरदेखी नै संघर्ष गर्नुपर्ने नगरप्रमुख वडले बताए । उनले भने, नगरपालिकामा छात्रा अधिकारका लागि विध्यालय तथा समुदाय स्तरमा अभियान चलाउछौं ।
त्यस्तै, विध्यालयका छात्रालाई स्वास्थ्या सामाग्री वितरण गर्दै प्याराडाइज नेपालका अध्यक्ष मीन शाहिले छात्रा तथा महिला अधिकारका लागि आफुहरु निरन्तर लागि पर्ने बताए । महिला अधिकारका लागि एकदिन मात्रै नभएर हरेक दिन प्रयत्नरत हुनुपर्ने बताउँदै उनले यश विषयमा स्थानिय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन ।
कार्यक्रममा छात्रा स्तरिय नृत्य प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता र विध्यालयका छात्राहरुलाई स्वस्थ्य सामाग्री वितरण गरिएको थियो ।
#छात्रा अधिकार दिवस#महिला विशेष कार्यक्रम
के तपाईको गाडी नो-पार्किङ्गमा छ ? होस् गर्नुहोस है… ह्विल लक लाग्न सक्छ !
ट्राफिक प्रमुख सिंहको टार्गेटमा ‘थ्रि-ओ’, भन्छन्- ‘यसपाली यो समस्या जिरोमा झार्छु…’
बझाङमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नै सास्ती, घण्टौँ हिँडनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो